Rita, Writing for My Sake!: ဖရက်ရှာ ဂျီဟောသူ
Posted by Rita at 3/23/2010 08:45:00 AM
စာရေးသူက ဘလော့ဂ်ရေးတဲ့ မသီတာများဖြစ်မလားလို့ ။ ၁၉၇၈/၈၀ တုံးကစာအုပ်ဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
သြော် ဂျီဟော ဂျီဟော...
ဘဝမှာ ဂျီဟောနဲ့ ကြုံဆုံချိန်လေး နည်းပေမယ့် အမှတ်တရတော့ ရှိမိတယ်။
ဒီစာရေးတဲ့ ပဉ္စမနှစ်ကျောင်းသူ ဆောင်းပါးရှင်တောင် ခုဆို အသက် ၅ဝ အနည်းဆုံး ရှိပြီပေါ့နော်။
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ !
ခုမှပဲ ဂျီဟော ဆိုတာ G Hall ကို ဆိုလိုချင်မှန်း သိတော့တယ်။
အဲ့ဒီ ဂျီဟောသူ ကို ရုပ်ရှင်ပဲ ပထမဆုံး ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ၄၊ ၅ တန်း လောက် ရှိပြီ ထင်တယ်။ စာအုပ်ကို မဖတ်ဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတော့ ဝယ်လိုက်ပေမယ့် စလုံးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။
ကျော်ဟိန်းသမီး နာမည်က ပိုးတု မဟုတ်လား.. တို့လည်းကြည့်ဖူးလိုက်တယ်... ၀တ္တုကတော့ လက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်... မစန္ဒာရဲ့ မာစတာပိစ် ပဲ ထင်တယ်..
နောက်ပိုင်း ပိုးကျော်ဟိန်း နာမည်နဲ့ သူ့အမေရိုက်တဲ့ ကားတွေမှာ ဆက်ပါနေသေးတယ်။ အဲဒါတွေတော့ မကြည့်ဖူးတော့ဘူး။
ကိုယ်ကြည့်ခဲ့ဖူးတာ ဒါရိုက်တာ ကြည်စိုးထွန်း ရိုက်တဲ့ နှစ်ကားပဲ။ နှစ်ကားလုံး သူ့ကို ကြိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့ ရုပ်ရည်ပုံစံကို ကြိုက်တယ်။ :)
ဂျီဟောသူကို ဗွီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြီး နောက်မှစာအုပ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မစန္ဒာသမီးနဲ့ကျောင်းကားအတူတူစီးတော့ သူ့အမေရဲ့ဘယ်စာအုပ်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်နေပြီဆိုတာတွေ သူပြောပြောပြလို့ သိရတယ်။
ဇွန်တုို့ဆယ်တန်းပြီးတော့ အရိပ်လည်းဖတ်ရင်း တက်ရတော့မယ် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးကို မြင်ယောင်ရင်း ပျော်ခဲ့တာ။ ၀ိုင်တီယူတက်ဖြစ်ခဲ့ရင် သေချာပေါက် အာခီပဲ ယုမိမှာ။ ကျောင်းမဖွင့်ဘဲ ၃နှစ်ကျော်၎နှစ်နီးပါးနားလိုက်တော့ အခြေအနေတွေတစ်မျိုးပြောင်းကုန်ပြီး မတက်ဖြစ်တော့ဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဟိုတုန်းက ဂျီဟောဝတ္ထုတိုလေး ဝေမျှတဲ့ ရီတာ့ကို ကျေးဇူးပါ။
ဒို့တွေလည်း မစန္ဒာ ရဲ့ ဂျီဟော ကို နှစ်သက်ခဲ့သူပါ..
အမက ကျောင်းတတ်တုန်းက စာရေးဖို့ နေနေသာသာ ဘာမှ အဖြစ်မရှိပါဘူးကွာ
အခု ဘလော့ဂ်ရေးတော့ အဖြစ်ရှိနေပြီလို့ မဆိုလိုပါဘူး...ဥခွံထဲက တိုးထွက်ကြည့်နေရုံသာပါ...